Xildhibaan Afaraale “Ergadii na soo dooratay waxaa u yeeray Al-shabaab” – Kalfadhi
Xildhibaan Afaraale “Ergadii na soo dooratay waxaa u yeeray Al-shabaab”
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo katirsan xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhow Xildhibaanada ka jor sheegay in Ergadii soo dooratay Golaha Shacabka ay halis ugu jiraan Al-shabaab loona baahan yahay in dagaal mideysan lagu qaado Al-shabaab.
“Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa u yeeray Ergadii na soo dooratay waxayna ku jiraan halis amni sidaas darteed waa inaa galnaa dagaal ka dhan ah Al-shabaab”ayuu ka hor sheegay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale.
Xildhibaan Afaraale ayaa ku baaqay in Soomaaliya ay u baahantahay in qof kasta uu gurigiisa kala dagaalo Al-shabaab si looga suuliyo dalka oo ay dhibaato badan ku haayaan.
“Waa in qof kasta oo Soomaali ah gurigiisa ka bilaawaa dagaalka Al-shabaab oo dalka curyaamiyay” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale.
Xildhibaan Cabdi Cali “Wasiirkii isticmaala lacag aan miisaaniyadda ku jirin waa tuug”
Xildhibaan Dhahar oo ka digay carqaladayn uu sheegay in wasaaradda waxbarashada DFS ay ku hayso Puntland